လေယာဉ်ဖြင့်ပျံသန်းသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်လက်မှတ်များကိုဝယ်ယူပါ။ ?
Find လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်အားလုံးအာမခံချက်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
destinia။ ။ ဒီရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုပြီးလေယာဉ်ပျံသန်းမှုကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့အပြည့်အ ၀ အာမခံထားပါတယ်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သင်တန်းဖြေ - ကျော်ကြားတဲ့ဟိုတယ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကသင့်ကိုအရမ်းစျေးပေါတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေရအောင်ကူညီပေးပါတယ်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Skyscannerဖြေ - အသုံးအများဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးဈေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုရှာဖွေရာမှာအကောင်းဆုံးဂုဏ်သတင်းရတယ်။ သင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်လိုလျှင်သင်သာပြုလုပ်ရမည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
Lufthansaဂျာမနီလေကြောင်းလိုင်းနှင့်ဥရောပတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အကောင်းဆုံးပျံသန်းမှုကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
eDreamsကမ္ဘာပေါ်ရှိခရီးသွားအေဂျင်စီများအနက်မှတစ်ခုနှင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပျံသန်းမှုအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ သူတို့နှင့်အတူသင်၏လေယာဉ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ ဒီမှာဝင်ပါ.
အားလပ်ရက်များသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များရောက်သည့်အခါတိုင်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရသည်။ အခြားနေရာများကိုသိကျွမ်းခြင်းထက်ပိုကောင်းသောနည်းလမ်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သည်ပျင်းရိခဲ့လျှင်၊ ရက်ပေါင်းများစွာခရီးရှည်သွားရခြင်းကြောင့်၊ လေယာဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်မယ့်နေရာကိုရောက်လိမ့်မယ်။ ဒီအကြီးအအားသာချက်မှလျှင်ကျနော်တို့ထည့်ပါ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့ကစီစဉ်ထားတဲ့အားလပ်ရက်တွေမှာရှိလိမ့်မယ်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ဖြေ - ရှာတွေ့မှအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခု လေယာဉ်အပေးအယူကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲမမှတ်သောအခါ။ ဆိုလိုသည်မှာရာသီဥတုသည်သြဂုတ်လနှင့်အမျိုးသားအားလပ်ရက်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့အားလုံးသိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့ထံမှလွတ်မြောက်ရန်သင်ကံကောင်းပါကသင်၏လေယာဉ်လက်မှတ်ပေါ်တွင်သင်ထင်သည်ထက်အများကြီးပိုသက်သာလိမ့်မည်။
လက်မှတ်တွေသီးခြားစီ: တစ်ခါတလေ၊ လက်မှတ်ကြိုတင်မှာကြားထားပါ နောက်ကျောနှင့်ထွက်သွားတာအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လက်မှတ်များကိုသီးခြားသီးသန့်ထားသောအခါငွေစုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးသင်အနီးကပ်ကြည့်ရလိမ့်မည်၊
အကြေးခွံ: သော်လည်း ခရီးစဉ်အပေါ် stopovers သူတို့သည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေမည်။ ယင်း၏စျေးနှုန်းကိုအလွန်လျှော့ချလို့ပဲ။
နာရီများဖြေ - နာရီဟာငါတို့ရဲ့အိတ်ကပ်ထဲကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသံသယမရှိပါဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ်ရာသောနေ့ကိုမမြန်လျှင်၊ အချိန်သည်လည်းအတားအဆီးဖြစ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်မှာထားနိုင်သည် တန်ဖိုးနည်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ သငျသညျနံနက်ယံ၌သို့မဟုတ်ညအချိန်၌အလွန်ပထမ ဦး ဆုံးအရာကိုရှေးခယျြလျှင်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေးနှုန်းသည်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်။ သင်ရုံထွက်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်!
ဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီနှင့်နိုဝင်ဘာတို့သည်ဖြစ်လာသည် ခရီးသွားဖို့စျေးပေါလ။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏နေ့ရက်များကိုအမြဲကြည့်ရှု။ ထိုအချိန်တွင်ကြိုတင်မှာကြားထားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အားလပ်ရက်များရှိပါက၊ သင်စိတ်ထဲထားရှိသောအားလပ်ရက်အနည်းငယ်ကိုအမြဲပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါအင်တာနက်သည်စိတ်ကူးမရှိသော်လည်းလူတိုင်းလုပ်နိုင်သည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကြားခံများ၊ စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ အဲဒါထိုက်တန်တယ်လို့မင်းမထင်ဘူးလား။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တာအကောင်းဆုံးကတော့ - လေယာဉ်ရှာဖွေသူ ဤဆောင်းပါးအစတွင်သင့်ကိုထားခဲ့သည့်သူများကဲ့သို့။ ထိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သွားရောက်လိုသောနေ့စွဲနှင့်နေရာနှစ်ခုလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာများအမြောက်အများရလိမ့်မည်၊ သူတို့၏စျေးနှုန်းများနှင့်လေယာဉ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အမှာစာရသည်။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာငါတို့ရှေ့မှာရှိရမယ့်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခု။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအနေဖြင့်သင်သည် Skyscanner နှင့် Rumbo သို့မဟုတ် Destinia နှစ်ခုလုံးကိုသုံးနိုင်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့ကိုလွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ လူသိအများဆုံး မင်းလက်ထဲမှာရှိနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မှုပြီးသည်နှင့်သိကျွမ်းခြင်း၏ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းစတင်သည် ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘွတ်ကင်လုပ်ရမလဲ။ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေဖို့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့မလာနိုင်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကစျေးနှုန်းကိုနည်းနည်းလေးညှိဖို့လိုတယ်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သိထားရမည့်အချက်မှာယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၊ လက်မှတ်ဈေးမတိုင်မီခုနစ်ပတ်ခန့်တွင် ၁၀% နီးပါးစျေးသက်သာသောနှုန်းထားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်မြန်လျှင်၊ သင်ထွက်ခွာသည့်နေ့တွင်ပင်လက်မှတ်သည်စျေးနှုန်း ၃၀% အထိမြင့်တက်သွားနိုင်သည်ကိုသင်သိရမည်။
သင်သည်ရှာဖွေခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်း၏အဓိကအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ အခုတော့ကြိုတင်မှာကြားထားချက်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့သာကျန်ပါတော့တယ်။ ပြီးတာနဲ့ သူတို့သည်သင့်အားအတည်ပြုစာကိုအီးမေးလ်သို့ပို့လိမ့်မည် သင်ထောက်ပံ့သော သင်၏လက်မှတ်နံပါတ်နှင့်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်နံပါတ်များပေါ်လိမ့်မည်။
အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ် အွန်လိုင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းနိုင်ခြင်း၏အားသာချက်များ။ နှစ်သိမ့်မှုဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အမြဲတမ်းအတူတကွနေထိုင်မည့်အရာဖြစ်သည်မှာသေချာသည် အေဂျင်စီတစ်ခုသို့သွားပြီးနံနက်ခင်းတစ်လုံးတည်းနေခြင်းသည်အိမ်ရှိဆိုဖာပေါ်တွင်သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်းသည်အတူတူပင်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့အပြင်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရမည်ဖြစ်သည်အခြားသူများကိုရှိသည်။
သတင်းအချက်အလက်ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်ကပိုပြီးကျယ်ပြန့်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မင်းလုပ်နိုင်မှာပါ ကွဲပြားခြားနားသောကုမ္ပဏီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသင်သွားလိုသည့်နေရာများနှင့်သင်သိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုခံစားသည်။
အချိန်ဇယားမရှိပါဖြေ - တစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်ပြီး၊ ရောက်ပြီဆိုရင်စိတ်မပူပါနဲ့ ခရီးသွားအေဂျင်စီ ပိတ်လိုက်တယ် ရှူရှိုက်ပါ၊ အနားယူပါ၊ ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပါ။ ထိုအရပ်၌သင်ရှာသောအရာကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်ကအသစ်တစ်ခုကိုကြည့်ချင်လျှင်သင်ကကူးယူသို့မဟုတ်နောက်တစ်နေ့ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
စျေးနှုန်းများဖြေ - ကျနော်တို့မှတ်ချက်တွေပေးနေတာနဲ့အမျှငါတို့ကိုအမြဲစိုးရိမ်ပူပန်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့စျေးနှုန်းပဲ။ ဤကိစ္စတွင်မည်သည့်ကြားခံမျှရှိမည်မဟုတ်ပါ အကျိုးရှိသောကမ်းလှမ်းမှုထက်ပို။ ဟုတ်ပါတယ်, သင့်လျော်သောအခကြေးငွေအားလုံးထည့်သွင်းခဲ့ကြပြီးတာနဲ့သင်ကနောက်ဆုံးစျေးနှုန်းသေချာအောင်ရန်ရှိသည်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ ဒါတောင်မှအွန်လိုင်းဟာစျေးနှုန်းချိုသာမှာသေချာပါတယ်။
သငျသညျလိုလျှင် လန်ဒန်ကိုသွားမယ်, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်စျေးပေါသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်များရရန်, သင်ခရီးစဉ်မတိုင်မီခုနစ်ပတ်ခန့်ကြိုတင်မှာကြားထားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိရန်လိုအပ်သည် ဤသို့ဖြင့်သင်သည်စျေးနှုန်း၏ ၂၀% ခန့်ကိုချွေတာနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအတွက်၊ သင်ဟာသင်မြန်နိုင်သမျှမြန်နိုင်သမျှရှာဖွေနိုင်ဖို့၊ သင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ဖို့အမြဲတမ်းအကြံပေးခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးစျေးအသက်သာဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်များသည်မေလနှင့်စက်တင်ဘာလများတွင်ဖြစ်သည်။
သင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုရွေးချယ်ကြလျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပဲရစ်ဟာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံး ဦး တည်ရာပါ။ သင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သောနေရာတစ်ခု။ ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းသတိရနေဖို့မလိုပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာစျေးကြီးတဲ့လေယာဉ်ပျံဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးစဉ်မတိုင်ခင် ၁၀ ပတ်လောက်မှာကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းကိုစတင်နိုင်ပါတယ်။ ပဲရစ်ကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးလများသည်စက်တင်ဘာလနှင့်အောက်တိုဘာလများဖြစ်သည်။
သငျသညျလိုလျှင် ရောမသို့လည်ပတ်ပါသင်၏လေယာဉ်လက်မှတ်ကိုတစ်လခွဲကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်လည်းလိုသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်ပိုမိုတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်မေလနှင့်ဇွန်လသည် ၀ ယ်လိုအား နည်း၍ လပြည့်ပြီးပြည့်စုံသောလများဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
တစ်ဦးကိုရှာဖွေ မက်ဒရစ်သို့ပျံသန်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ အားလုံးလေဆိပ်ကချိတ်ဆက်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အကယ်စင်စစ်သင်သည်များစွာသောနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်ပင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သောကြာနေ့နှင့်တနင်္လာနေ့ကဲ့သို့သောအဓိကနာရီများနှင့်နေ့များနှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စျေးနှုန်းများတဟုန်ထိုးမြင့်တက်သွားသည်။
La ဘာစီလိုနာ ဒါကြောင့်လည်းအလွန်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ် ဦး စလုံးအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ။ ဒါကြောင့်ခရီးကိုသွားရတာဟာပြproblemနာမဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံသင်ခရီးစဉ်အချို့နှင့်သူတို့၏ stopoover များတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယူရိုအနည်းငယ်ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းရှိ၊ ၀ င်ရောက်လာမှုနည်းသောအချိန်ကိုရွေးပါ၊ ၎င်းသည်သင်ထင်သည်ထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။